Ntuziaka ọsọ ọsọ na akpa aka na ụgbọ elu | Akụkọ Njem
Ntuziaka ọsọ ọsọ na ibu aka na ụgbọ elu
Maria | | Gbọ elu, Nduzi
Nchegbu dị ukwuu maka onye njem ọ bụla karịrị oke ibu nke ụgbọ elu na-achịkwa. Abia na ikwenye na ihe mgbochi ugbo elu na ibu na ebu, ime atumatu na akuko bu oru di nkpa.
Ugbu a enweghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ibu maka ọkọlọtọ aka nke ụgbọ elu niile nakweere. Ofgbọ elu ọ bụla na-akọwa nha dị iche na nha ọ bụla.
N'ụzọ dị otú a, ha abụghị otu nha nke ibu aka nke Iberia rịọrọ nke Vueling na-arịọ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-emesapụ aka na oke na ịdị arọ nke akpa ahụ ebe ndị ọzọ na-egbochi mmachi.
Iji zere ịdaba n'ọnọdụ a, anyị na-ewetara gị ntuziaka ngwa ngwa nke anyị na-akọwa nha nke akpa aka n'ọtụtụ ụgbọ elu na-efe na Spain.
1 Esi lelee akpa online
2 Kedu ihe anaghị anabata na akpa enyocha?
3 Enwere mmachi mmiri na akpa?
4 Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na akpa ejiri ihe ma ọ bụ buru ibu karịa ka enyere?
5 Aka akpa nha nke kacha jiri ụgbọ elu na Spain
5.1 Mmanụ akpa aka
5.2 Ntuziaka akpa Iberia
5.3 Air France aka nha
5.4 TAP Portugal aka ibu nha
5.5 Ryanair aka ibu nha
6 Aghụghọ iji gafere ókè nke aka ibu
Esi lelee akpa online
Ọ bụrụ n’ị bụ otu n’ime ndị njem ahụ agaghị ebu naanị ngwongwo aka gị, ị ga-amararịrị na ọtụtụ ụgbọ elu na-enye gị ohere ịdebanye aha ma bipụta njem ịbanye na ntanetị tupu ịga njem. Ọ bụrụ n’inwere akpa buru ibu ma ọ bụ zụta ya, ị ka ga-aga na tebulu iji dobe ya mana nhọrọ ‘ibu nnyefe’ na-agba ngwa ngwa karịa na ahịrị ahụ abụghị ogologo
Kedu ihe anaghị anabata na akpa enyocha?
Agbanyeghị na iwu ụgbọ elu na-emetụta akpa ibu, enwere ụfọdụ ihe enweghị ike itinye na akpa gị enyocha.
Ọ bụrụ n ’n’oge ezumike gị ịzụrụ onyinye ma kechie ya, ị kwesịrị ịmata na ọ bụrụ n’ aka gị, nchekwa ọdụ ụgbọelu nwere ike imepe ha.
Flares, egbe ọkụ na ihe mgbawa. Tinyere oyiri.
Mmiri na-ere ọkụ, aerosols ma ọ bụ combustible.
Mmụọ ọcha ma ọ bụ agba thinner
Lecha ọcha na ịgba agba
Enwere mmachi mmiri na akpa?
Mgbochi mmiri na-emetụta naanị ibu ibu ka ị wee nwee ike ịnwe ohere iji ihe ịchọ mma kachasị amasị gị njem ma ọ bụrụhaala na ị hụ na emechiri ihe niile. Ma, mmanya na-aba n'anya nwere ókè ụfọdụ: lita 110 nke biya, mmanya lita 90 na mmụọ lita 10.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na akpa ejiri ihe ma ọ bụ buru ibu karịa ka enyere?
N'ozuzu, ị ga-akwụ ụgwọ ego maka ibu buru ibu ma ọ bụ buru ibu buru ibu. Ọ na-adịkarị ọnụ ala ịme ya tupu oge eruo n'ịntanetị, yabụ ọ bụrụ na ịmara na ị ga-agafe oke ibu, ọ bara uru ịzụta kilo ole na ole tupu ị gaa ọdụ ụgbọ elu.
Ugboro ebubo ibu na-amalite na € 10 na ụgbọ elu ụgbọ ala dị ala dị ka Norwegian Air. Maka ụgbọ elu ndị ọzọ, dị ka TAP Portugal ma ọ bụ Air France, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ ọnọdụ ibu ha guzobere.
Aka akpa nha nke kacha jiri ụgbọ elu na Spain
Mmanụ akpa aka
Ihe nha nke ụlọ ọrụ na-akwado bụ 55x40x20 centimeters. Ha na-enye ohere ka kilogram 10 n'arọ na ngwa n'ime ụlọ.
Ntuziaka akpa Iberia
Ihe ndị ndị ụgbọelu ndị Spain kwere bụ 56x45x25 centimeters ọ naghị ewepụta oke ibu. Ọ na-enyekwa ohere a ngwa mma.
Air France aka nha
Airgbọ elu French nke France na-edochi mgbochi nke 55x35x25, nke kachasị nke 12 kilos na ngwa n'ime ụlọ.
TAP Portugal aka ibu nha
Uzo nke ibu aka na ọdụ ụgbọ elu Portuguese bụ sentimita 55x40x20 na naanị kilogram asatọ nwere ike itu akpa ahụ.
Ryanair aka ibu nha
Airgbọ elu a na-enye gị ohere iburu ngwa na ụlọ anaghị eru kilogram iri na ịdị arọ ma nwee nha nke 55x40x20 centimeters.
Aghụghọ iji gafere ókè nke aka ibu
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem n'ịntanetị eDreams mere nyocha zuru ụwa ọnụ nke ihe karịrị ndị njem 2.000 si Spain na ihe karịrị ndị ọrụ 11.000 ndị Europe iji nyochaa àgwà nkwakọ ngwaahịa ha na echiche ha gbasara mgbochi akpa.
Abịa na ịkwado akpati, ndị a bụ ụfọdụ aghụghọ nke ndị njem si Spain na-eji zere imebiga ihe ókè karịa ụgbọelu.
Itinye n'ọtụtụ akwa iji zere itinye ha n'ime akpa ahụ (30%)
Zụta na Ọrụ Free iji nweta akpa (15%)
Na-ebu ihe kachasị arọ na akpa gị (16%)
Chekwaa akpa aka n'okpuru kootu (9%)
Mụmụọ ọnụ ọchị na ndị ọrụ njikwa ka anya kpuo ìsì (6%)
Zoo otu akpa akwa n'ime ọzọ (5%)
Chere na ngwụsị nke kwụ n'ahịrị maka akpa ka ị banye na njide nke ụgbọ elu na-akwụghị ụgwọ (4%)
Ndị ọrụ ọnụ ụzọ na-akwụ ụgwọ (2%).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Gbọ elu » Ntuziaka ọsọ ọsọ na ibu aka na ụgbọ elu
Durian, mkpụrụ osisi kacha sie ike n’ụwa
Ahụkarị Akwa nke Peru